at & t wuxuu bilaabmayaa inuu soo baxo android 8.0 oreo oo loogu talagalay lg v20
Wararka & Dib U Eegista
Ugu Weyn Ee Wararka & Dib U Eegista AT&T waxay bilaabeysaa inay soo saarto Android 8.0 Oreo oo loogu talagalay LG V20
AT&T waxay bilaabeysaa inay soo saarto Android 8.0 Oreo oo loogu talagalay LG V20
V20 waa mid ka mid ah calamado aad u da 'weyn oo helay Android 8.0 Oreo oo ku taal Mareykanka, in kasta oo dhammaan shirkadaha dalka ku shaqeeya aysan wali sii deynin cusbooneysiinta. Hal usbuuc kadib markay bilaabantay soo saaritaankii Android 8.0 Oreo oo loogu talagalay LG V20 Koonfurta Kuuriya , Sprint ayaa soo qaadatay cusbooneysiinta iyo u geeyay macaamiisheeda .
Saddex toddobaad ka dib Gudbinta LG V20 aaladaha la helay cusbooneysiinta Android 8.0 Oreo, AT&T waxay go'aansatay inay u fidiso macaamiisheeda isla cusbooneysiinta Xambaarahu wuxuu cusbooneysiiyay bogga taageerada LG V20 si uu u muujiyo isbedelka cusub wuxuuna ku daray isbadal rasmi ah oo liis garanaya qaar ka mid ah astaamaha cusub ee ugu muhiimsan iyo hagaajinta ku jira cusbooneysiinta.
Ka sokow Android 8.0 Oreo, LG V20 sidoo kale waxay heli doontaa balastarka amniga ee Juun. Dhowr waxyaalood oo kale ayaa lagu xusay isbeddellada sidoo kale, sida Hay'adda Shabakadda Jawaab-bixiyaha Koowaad (FirstNet) IOC2 iyo beddelka Magaca Goobta Heshooyinka Moobilka (APN), wax kastoo macnaheedu yahay.
Cusbooneysiinta ayaa culeyskeedu yahay 1.7GB waxaana lagu qeybiyaa OTA (hawada) mowjado, taas oo macnaheedu yahay inay qaadaneyso dhowr maalmood in la wada gaaro LG V20 qalabka AT & T.
xigasho: AT&T via AndroidSoul
galaxy note 20 5g kiiska
Tijaabada dukumiintiga dukumiintiga istiraatiijiga ah ee habka agile
Best Buy waxay bixisaa $ 300 Galaxy Note 8 keydinta macaamiisha AT&T iyo Sprint
EA & apos; s Geedaha iyo Zombies Heroes ciyaarta kaararka la ururin karo waxay ku timaadaa aaladaha Android iyo iOS
Jimcahan Madow, Samsung Galaxy S7 iyo S7 gees waxay la yimaadeen madax-madax-bannaan Gear VR
Sida loo helo ama loogu tirtiro taleefankaaga Android lumay Google & apos;
Sida loo dajiyo shaashadda qufulka muuqaalka ee Galaxy S10, S10 +, ama S10e
Qaar ka mid ah sameecadaha ugu wanaagsan ee Bose iyo sameecadaha dhagaha la galiyo ayaa lagu iibiyaa qiimo waali ah
iPad Air 4 64GB vs 256GB kaydinta: keebaa habboon inaad hesho?
Istaraatiijiyadda T-Mobile & apos; 5G ma ka fiican tahay Verizon & apos; s? Maaha mid dhakhso badan, dheh 4G vs 5G xawaaraha iyo tijaabooyinka caymiska
Kike batteriga Kuke iPhone 7 wuxuu noqon karaa mid ka caqli wanaagsan kan Apple & apos; ee bahalnimada baaxadda weyn leh
Deal: Unlocked Honor 6X wuxuu ku dhacaa $ 150 on Amazon iyo Best Buy, qiimaha ugu hooseeya ilaa taariikhda